TOP 7 Máy Phát Điện Gia Đình Giá Rẻ 2022 Và Cách Chọn Máy | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: TOP 7 Máy Phát Điện Gia Đình Giá Rẻ 2022 Và Cách Chọn Máy | Muasalebang in Muasalebang
1 Iyini ijeneretha? Izizathu zokukhetha ijeneretha yasekhaya
1.1 Iyini ijeneretha?
1.2 Izizathu zokukhetha ijeneretha yasekhaya
2 Umthamo we-generator udinga ukufaneleka
3 Hlala kude namajeneretha angaziwa ngomsuka wawo
4 Hlobo luni lwe-generator yasekhaya okufanele ukhethe ukuyithenga?
5 Amajeneretha ayi-7 ahamba phambili asekhaya ngo-2021
5.1 Ijeneretha yasendlini yakwaHyundai 2.3kW HY30CLE – VND 8,990,000
5.2 Ijeneretha kaphethiloli yakwaHyundai 6kW HY9000LE – VND 23,900,000
5.3 I-Hyundai HY7000LE 1-isigaba generator – VND 21,900,000
5.4 2.5kW Hyundai HY3100LE ijeneretha yokuqala – VND 11,900,000
5.5 Ijeneretha yedizili iHyundai DHY6000SE – VND 38,900,000
5.6 Ijeneretha yasekhaya iHyundai DHY6000LE 5kW – VND 35,450,000
5.7 Huu Toan Generator HG2900
6 Amanothi ambalwa ohlelweni lokusebenzisa ijeneretha yasekhaya
6.1 1. Khetha ijeneretha yasekhaya ukuthi zingaki ama-kw anele?
6.2 2. Ingabe amajeneretha asendlini angasebenzisa ama-air conditioner?
6.3 3. Hlobo luni lwejeneretha okufanele lusetshenziswe ekhaya?
6.4 4. Ingabe kufanele usebenzise ijeneretha yasekhaya?
Iyini ijeneretha? Izizathu zokukhetha ijeneretha yasekhaya
I-Generator iyithuluzi eliguqula amandla emishini abe amandla kagesi ngokusekelwe kumgomo wokungeniswa kwe-electromagnetic. Imithombo yamandla eyimishini eyinhloko ingaba izinjini zezinjini zomusi, izinjini zomoya, izinjini zamanzi, izinjini ezivuthayo zangaphakathi noma eminye imithombo yamandla ayimishini.
Wonke amajeneretha athandwayo amanje asebenzisa amandla emishini asuka ezinjinini ezivuthayo zangaphakathi. Lezi zinjini zisebenza kakhulu ngophethiloli, uwoyela noma igesi.
Ngaphezu kokukhiqiza ugesi, iphinde yenze ezinye izindima ezifana nokulungisa nokulungiswa kwamandla kagesi.
Izizathu zokukhetha ijeneretha yasekhaya
Esimeni lapho amandla ehluleka isikhathi eside ezimeni zezulu ezinzima ezifana nomoya onamandla noma umbani, kulimaze inethiwekhi yamandla.
Amajeneretha ahlinzeka ngomthombo ozinzile kagesi ngezikhathi zonyaka ezihamba phambili, lapho ukugcwala ngokweqile kubangela amandla alokozayo.
Uma usebenza noma usebenzisa ibhizinisi lasekhaya, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi izinto zikagesi ezifana ideskithophu, i-laptop, iphrintaI-WIFI…
Isiza ukugcina ukudla isikhathi eside lapho ijeneretha ingakwazi ukukugcina ifriji isebenza izinsuku esimweni esiphuthumayo.
Ukuba nejeneretha yekhaya kuzoqinisekisa kakhulu ngoba idivayisi iqinisekisa umthombo wokukhanya noma inikezela ngezidingo zokuzijabulisa, ukukhempa, imicimbi yangaphandle.
Umthamo we-generator udinga ukufaneleka
Into yokuqala okufanele uyenze lapho uthenga i-generator ukulinganisa inani lamadivayisi azosetshenziswa lapho ugesi uphela, ukubala ukusetshenziswa kwamandla okuphelele. Ukusuka lapho, khetha izinto ezisetshenziswayo ezinomthamo ofanele, ugweme ukugcwala ngokweqile, ukufinyeza, kanye nokushiswa kwezinto ezixhunywe kujeneretha. Futhi imikhiqizo enomthamo ongaphezu komthamo wangempela ka-10% – 25% iyisinqumo esiphelele.
Kunconywa ukukhetha ijeneretha enamandla amakhulu kunomthamo wangempela osetshenziswayo ukusuka ku-10% – 25% ukwandisa impilo nokuqina.
Uma udinga ijeneretha kuphela ukuze ukhanyise, sebenzisa isiphephetha-moya bese uvula i-TV, khona-ke udinga kuphela amandla amancane naphakathi ukusuka ku-2kW kuya ku-4 kW. Futhi uma ufuna ukusebenzisa amadivaysi amaningi alambele amandla afana I-air conditionerkufanele ikhethe umthamo omkhulu koku-4 kW kuze kufike ku-6 kW. Umshini kufanele ube nesici sokuphepha esingaba ngu-1.1 (cela isiqondiso kuchwepheshe) ukuze ugweme ukugcwala kukagesi.
Ungakhethi i-generator yomndeni enomthamo omkhulu kakhulu, ngoba kuzoholela ezindleko eziphakeme, ukusetshenziswa kukaphethiloli kanye nokunciphisa ukuphila kalula. Khetha amajeneretha angu-4 anamandla kaphethiloli angenzi umsindo lapho esebenza noma ekhipha intuthu. Amajeneretha anezinjini ezi-2-stroke anomsindo omkhulu nentuthu eyengeziwe uma eqalisa injini.
Hlala kude namajeneretha angaziwa ngomsuka wawo
Ubani ongathandi ukuthenga imikhiqizo ngentengo enhle, akunjalo? Kodwa-ke, uma ukhetha i-generator yemvelaphi engaziwa, ngaphandle kwewaranti, khona-ke ngisho noma ulondoloza izindleko zokuqala, uzophinde usebenzise izigidigidi zezinye izimali. Ngenxa yokuthi imishini engeyona eyohlobo oludumile ngeke iqinisekise ukuphepha kwemishini kagesi yasendlini, ngaphezu kwalokho, umshini ungasebenza kahle kakhulu kuphethiloli. Ngaphandle kwalokho, ijeneretha engavikelekile noma esetshenzisiwe izobanga umsindo omkhulu, ibangele izinkinga emndenini wakho kanye nakomakhelwane abangomakhelwane.
Amajeneretha emvelaphi engaziwa akwenza kuphela “ukulahlekelwa yimali”
Hlobo luni lwe-generator yasekhaya okufanele ukhethe ukuyithenga?
Imikhiqizo eyaziwayo, kodwa i-Cumming, i-Honda, i-Hyundai … ivame ukukhetha imindeni enganaki kakhulu ngentengo. Uma ezezimali ziqinile, imishini ehlanganiswe endaweni esebenzisa izinjini ze-Honda ezifana nohlobo lwe-Huu Toan nayo mihle kakhulu.
I-Honda ingumkhiqizi wejeneretha onedumela elihle
Uma ufuna eyodwa ijeneretha ofanele umndeni wakhe, u-Nguyen Kim ujabule kakhulu ukukulethela imishini evela kuhlobo oludumile lwakwaHyundai. Ngomklamo wesimanje, umthamo ohlukahlukene kanye nowonga uphethiloli osebenzayo, ijeneretha KwaHyundai Kuzoba yisinqumo esihle kakhulu somndeni wakho!
Amajeneretha akwaHyundai athandwa yimindeni eminingi
Amajeneretha ayi-7 ahamba phambili asekhaya ngo-2021
Ijeneretha yasendlini yakwaHyundai 2.3kW HY30CLE – VND 8,990,000
Uhlobo lwejeneretha: Isebenza ngophethiloli
Ukusetshenziswa okuqhubekayo komshini: amahora angu-10
Umthamo wesilinda: 196cc
Amandla asetshenzisiwe: 2.3kW
Amandla aphezulu: 2.6kW
Inombolo yezigaba: 1 isigaba
Izinga lomsindo: 74dB(A)
Igama Brand: Korea
Ijeneretha kaphethiloli yakwaHyundai HY30CLE enenjini enamandla, isisombululo esiphephile uma amandla ehluleka
IHyundai HY30CLE iwumshini osebenza ngamandla aqhubekayo angu-2.3kW ukuze ukwazi ukusebenzisa izinto zikagesi eziningi zasendlini ngesikhathi esisodwa. Ijeneretha yasendlini inikeza umthombo wamandla kagesi wesigaba esisodwa esingu-220V/50Hz, ongasebenza ngokuqhubekayo amahora angu-10. Umthamo wethangi likaphethiloli ofinyelela kumalitha ayi-13 osebenza ngamandla angaqalwa ngesiqalisi sikagesi noma ngokuqhunyiswa kalula.
Ijeneretha kaphethiloli yakwaHyundai 6kW HY9000LE – VND 23,900,000
Ukusetshenziswa okuqhubekayo (50% CS): amahora angu-16
Umthamo wesilinda: 420cc
Amandla asetshenzisiwe: 2.5 KVA (6.0Kw)
Amandla amakhulu: 2.8 KVA (6.6kW)
Ubukhulu: 670x540x555 mm
Izinga lomsindo: 75dB(A)
Isisindo: 86 kg
Ijeneretha 6kW Hyundai HY9000LE
Ijeneretha engu-6kW izoqhuma IHyundai HY9000LE ingasebenza ngokuzinzile ngokuqhubekayo amahora angu-22, ihlangabezana nezidingo zomkhaya. Injini yesigaba esisodwa sikaphethiloli, enamandla afinyelela ku-6.6kW ukusebenzisa zonke izinto ezisetshenziswayo ngisho neziqandisi, ama-air conditioner, umshini wokuwasha… Umshini wonga uphethiloli, uphila isikhathi eside, futhi awuhambisani nemvelo, ulungele imizi noma amabhizinisi amancane.
I-Hyundai HY7000LE 1-isigaba generator – VND 21,900,000
Ukusetshenziswa okuqhubekayo komshini: amahora angama-22
Umthamo wesilinda: 389cc
Amandla asetshenzisiwe: 5.0kW
Amandla aphezulu: 5.5kW
Isisindo: 82 kg
Ubuchwepheshe baseKorea 5kW ijeneretha yasekhaya evela kwaHyundai HY7000LE
Ijeneretha kaphethiloli yakwaHyundai HY7000LE Ikhiqizwe ngaphansi kobuchwepheshe besimanje baseKorea. Kuyisixazululo esiphephile samahhovisi nemindeni uma kunqamuka ugesi. Injini kaphethiloli enamalitha angu-22 kaphethiloli idla amalitha angu-2.68 ngehora ukuqinisekisa ukuthi isebenza ngokuqhubekayo. Amajeneretha asekhaya ahlinzeka ngogesi ezintweni zikagesi zasendlini noma ezinsizeni ezinamandla okusebenza angaphansi kuka-5kW.
2.5kW Hyundai HY3100LE ijeneretha yokuqala – VND 11,900,000
Amandla asetshenzisiwe: 2.5kW
Amandla aphezulu: 2.8kW
Ubukhulu: 610x490x490 mm
Izinga lomsindo: 68dB(A)
Ijeneretha yokuqala yakwaHyundai 2.5kW HY3100LE enomsindo ophansi, kulula ukuyisebenzisa
Isiqalisi sejeneretha iHyundai HY3100LE inethangi likaphethiloli elingagcina uphethiloli omningi onamandla amalitha ayi-13 kanye nokusetshenziswa kwamalitha ayi-1.3 kuphela ngehora. Lokhu kusiza ekwandiseni izindleko zikaphethiloli kodwa kusaqinisekisa ukuthi umshini usebenza ngokuzinzile nangokuqhubekayo amahora amaningi. Lo mshini ubuye ufakwe isembozo esivumelana nemvelo, esivikela umsindo ukuze udale izimo ezivumayo lapho uqala umshini futhi uwusebenzisa.
Ijeneretha yedizili iHyundai DHY6000SE – VND 38,900,000
Uhlobo lwe-generator: Inamandla kawoyela
Ukusetshenziswa okuqhubekayo komshini: 16h
Umthamo wesilinda: 212cc
Amandla asetshenzisiwe: 5kW
Ubukhulu: 920x520x760 mm
Isisindo: 160 kg
Ijeneretha kadizili yakwaHyundai DHY6000SE enethangi elikhulu likaphethiloli, kulula ukuyihambisa
Ngesakhiwo esiqinile sohlaka, okuhlanganisa namasondo enza amajeneretha edizili asebenze IHyundai DHY6000SE elula ukunyakaza. Ithangi elikhulu likaphethiloli kanye nethangi elikhulu lamafutha okugcoba livikela okokusebenza futhi lenze ijeneretha ihambe kahle. Ngesikhathi esifanayo, isici sokupholisa umoya esakhelwe ngaphakathi sandisa impilo yedivayisi.
Ijeneretha yasekhaya iHyundai DHY6000LE 5kW – VND 35,450,000
Ukusetshenziswa okuqhubekayo komshini: amahora angu-13
Amandla aphezulu: 5.8kW
Ubukhulu: 720x480x600 mm
Izinga lomsindo: 79dB(A)
Isisindo: 116 kg
Ijeneretha yakwaHyundai 5kW enenjini eqinile futhi ehlala isikhathi eside
Ijeneretha yakwaHyundai DHY6000LE Injini kadizili ine-4-stroke injini, kulula ukuyisebenzisa. Lo mshini usebenza ngamandla aqhubekayo angu-5kW futhi ungafinyelela ku-5.8kW uma ufinyelela emahoreni angu-13 ngokuqhubekayo..
Umthamo wesilinda: 163cc
Amandla asetshenzisiwe: 2kW
Amandla aphezulu: 2.3kW
Ubukhulu: 635x425x475 mm
Izinga lomsindo: 65dB
Isisindo: 48 kg
Igama Brand: Vietnam
Ijeneretha ye-Huu Toan enenjini yeHonda yekhwalithi ephezulu
Ijeneretha isebenzisa injini yeHonda yekhwalithi ephezulu enegama lesi-Vietnamese engu-4-stroke. Usayizi ohlangene ufakwe isistimu yokupholisa ukuze welule impilo yomshini. Ngaphezu kwalokho, umshini usebenza ngomsindo ophansi, ukusebenza okuthulile nokuzinzile nomthamo oqhubekayo we-2kW.
Amanothi ambalwa ohlelweni lokusebenzisa ijeneretha yasekhaya
– Vala injini ngaphambi kokufaka uphethiloli ukuze ugweme ukubangela umlilo. Sebenzisa kuphela uhlobo lukaphethiloli olutuswe imanuwali yokukhiqiza noma esohlwini lwelebula lenjini.
– Ngisho noma ungawusebenzisi njalo, kufanele uqale umshini imizuzu emi-5-10/ngesonto.
– Kusukela emahoreni angama-50 – 100 wokusebenzisa umshini, qala uhlole izinga likawoyela, amanzi, ukungezwani kwebhande labalandeli. Ngemva kwamahora angu-500 wokusebenzisa umshini, hlola futhi uhlanze uhlelo lokupholisa, shintsha amafutha nesihlungi.
Isibonelo Sesayithi – Imibuzo Evame Ukubuzwa(FAQ)
1. Khetha ijeneretha yasekhaya ukuthi zingaki ama-kw anele?
Uma umndeni wakho usebenzisa izidingo zokukhanyisa kuphela, udinga kuphela ukusebenzisa ijeneretha okungenani engu-2kW.
2. Ingabe amajeneretha asendlini angasebenzisa ama-air conditioner?
Ezintweni zikagesi ezidla amandla amaningi njengama-air conditioner, amafriji, njll., amajeneretha anamandla angaphezu kuka-4kW angahlangatshezwana nawo. Ukuze ubone ulwazi olwengeziwe mayelana namajeneretha asekhaya, ungabheka esihlokweni esingenhla.
3. Hlobo luni lwejeneretha okufanele lusetshenziswe ekhaya?
Kunezinhlobo eziningi ezidumile zasekhaya nezamazwe ngamazwe ezikhiqiza amajeneretha asendlini. Isibonelo, i-Hyundai, i-Honda, i-Huu Toan, … ungabona isihloko esingenhla ukuze ubhekisele kumamodeli adumile namuhla.
4. Ingabe kufanele usebenzise ijeneretha yasekhaya?
Ukuthengela umndeni wakho ijeneretha kukusiza ukuthi uqinisekise ugesi ozinzile, ikakhulukazi kule sizini yamanje enelanga. Ngaphezu kwalokho, ijeneretha iphinde inciphise ukubambezeleka kokusebenza kwemizi yamabhizinisi noma labo abasebenza ekhaya lapho ugesi uphelile.
7 Cách Làm Bánh Bông Lan Bằng Nồi Chiên Không Dầu Mềm Xốp | Muasalebang